Robert Hooke: Taariikh nololeedka iyo muhiimada daahfurkiisa | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | | Kala bixid
Robert hooke Wuxuu ahaa saynisyahan weyn oo fikrado iyo horumarin badan ku soo kordhiyay sayniska. Wuxuu kaloo ahaa falsafad dabiici ah. Wuxuu ahaa borofisar ku takhasusay joomatari iyo sahamin magaalada London, England. Waxaa loo aqoonsaday kaalintiisii ​​weyneyd ee uu ka qaatay cilmiga fiisigiska, microscopy, biology iyo dhismaha. Wuxuu alifay aalado ay ka mid yihiin heerkulbeegga aalkolada, heer-kul-mitirka, anomometerka iyo qalab kale, kuwaasoo dhaxal muhiim ah u leh sayniska iyo bani-aadamka.
Qoraalkan waxaan ku tagi doonnaa waagii hore si aan wax uga baranno taariikh nololeedkii iyo waxyaabihii uu Robert Hooke sameeyay intii uu noolaa. Ma rabtaa inaad ogaato muhiimadda saynisyahankani u leeyahay dunida sayniska? Halkan waxaan si faahfaahsan kuugu sharxeynaa 🙂
1 Nolol iyo geeri Robert Hooke
2.2 Unugyada iyo aragtida unugyada
2.3 Meeraha Uranus
2.4 Aragtida dhaqdhaqaaqa Planetary
Nolol iyo geeri Robert Hooke
Wuxuu dhashay July 18, 1635. Wuxuu ahaa kii ugu dambeeyay ee afar walaalo ah, laba wiil iyo laba gabdhood. Waxaa la sheegay inuu soo maray caruurnimo aad u kali badan oo murugo leh, wuxuu la soo dersay madax xanuun badan iyo calool xanuun, taas oo ka hor istaagtay inuu si caadi ah ula ciyaaro carruurta da'diisa ah. Kalinimadaas caruurnimadu waxay ka dhigtay inuu ku ciyaaro hal-abuur iyo maskax maleyn weyn. Wuxuu sameeyay qorraxda qorraxda, makiinadaha biyaha, maraakiibta karti u leh rasaasta, wuxuu kala saaray saacad naxaas ah wuxuuna dib ugu dhisay alwaax, isagoo si fiican u shaqeynayay.
Intii uu yaraa Hooke wuxuu ka mid ahaa Kooxda Choir ee Kaniisadda Katidral ee Diocese ee Oxford (Kulliyadda kaniisada Christ). Xilligan waxa uu ahaa kii ku abuurtay Hooke hamigiisa sayniska. Wuxuu aad u xiiseynayey shaqooyin kala duwan oo ilaalin ah oo la qabtay, maadaama uu tixgeliyey inay u hanjabeen maxmiyadda.
Kulamo muhiimad cilmiyeed, falsafad, iyo aqooneed ayaa lagu qabtay Westminster School, sidaa darteed Robert wuxuu kaqeyb galay inbadan oo kamid ah. Intii asxaabtii fasalku ku hawlanaayeen nashaadaadyo, Hooke wuxuu diiradda saaray sidii uu nolol u heli lahaa. Wuxuu bilaabay inuu xoogaa lacag ah kasameeyo kaaliyaha jirka anatomy. Markii dambe wuxuu ahaa caawiye shaybaar. Waqtigaas, 1658, waxaa la fuliyay dhismaha matoor hawo ama "machina boyleana", iyadoo lagu saleynayo tii Ralph Greatorex, oo uu Hooke u haystay "Too gross for any great task".
Wuxuu lahaa awood weyn oo xagga xisaabta ah. Ka dib shaqooyinkiisii ​​badnaa waxaa la aqoonsaday waxqabadkiisa waxaana lagula taliyay booska koowaad ee maareeyaha Royal Society of London. Booskani wuxuu u baahday inuu ahaado cilmi-baare weyn iyo aqoonyahan saynisyahan ah. Robert Hooke wuxuu waqti buuxa u huray mashaariicdiisa.
Aakhirkii wuu dhintay markay ahayd 3dii Maarso, 1703 magaalada London. Royal Society of London waxay ku siiyeen maamuus weyn dhamaan tartamada aan hoos ku arki doono.
Hooke wuxuu qayb kamid ah waqtigiisa ku qaatay la shaqeynta Boyle waxayna Boyle u soo bandhigtay himilo u gaar ah oo ah qaabeynta iyo dhisida matoor awood u leh isku haynta hawada si loo soo saaro meel banaan. Waxay sannado ku qaateen barashada cilmiga gaaska ilaa ay ka heleen. Soo helkiisii ​​ugu horreeyay wuxuu ahaa bamka hawada.
Mashiinkaan dabacsanaanta hawada iyo saameynta ay soo mareen marar badan. Thanks to bamkaan, qaaciddada Sharciga Gaas. Sharcigan waxaa lagu xaqiijin karaa sida mugga gaasku u yahay mid aan waafaqsanayn cadaadiska uu haysto.
Waxyaabaha kale ee uu soo helay wuxuu ahaa mid xad-dhaaf ah. Wuxuu la tacaalayay daadashada biyaha iyo dareerayaasha kale ee ka imanaya dhuumaha dhalada ee khafiifka ah. Tijaabooyinkaas waxaa lagu ogaaday in dhererka ay biyuhu gaadhaan ay la xiriirto dhexroorka tuubada. Tan waxaa maanta loo yaqaannaa madax-bannaanid.
Daahfurka Tani waxaa lagu daabacay si faahfaahsan weyn in uu shaqada "Micrography." Mahadsanid shaqooyinkaas awoodiisa ah wuxuu awood u yeeshay inuu qabto jagada Curator ee Royal Society of London.
Unugyada iyo aragtida unugyada
Thanks to mikroskoobka, Hooke wuxuu ogaaday in xaashida gufku ay leeyihiin godad yar yar oo polyhedral ah sida malab malab. God kastaa wuxuu ugu yeeray unug. Wixii uusan ogayn waxay ahayd muhiimadda unugyadan ay ku lahaan lahaayeen dastuurka uunka.
Waana in Robert daawanayay unugyada geedka ee ku jira qaab laba geesood ah. Sannado ka dib, nudaha noolaha ayaa la ogaan lahaa iyada oo ay ugu wacan tahay u kuurgeliddiisa mikroskoob.
Raadin kale waxay ku mahadsan tahay aqoonta uu ka haystay abaabulka unugyada. Qarnigii XNUMXaad, aqoonta uu bixiyay Robert Hooke, jagooyinka fikirka unugyada waa la fulin karaa:
Dhammaan noolaha waxay ka kooban yihiin unugyo iyo wax soo saarkooda.
Unugyadu waa unugyada dhismaha iyo shaqada.
Unugyada oo dhami waxay ka yimaadaan unugyo horay u jiray. Tan waxaa lagu daray 1858 by Virchow.
Dhamaadka qarnigan, daraasadaha soo socdaa waxay muujiyeen in unugyadu na siin karaan labadaba sababta iyo asalka cuduro badan. Tan macnaheedu waa in haddii qofku jiran yahay ay ugu wacan tahay inuu unugyo ku leeyahay gudaha oo jirada.
Sidoo kale mas'uul ka ahaa helitaanka meeraha Uranus. Si tan loo sameeyo, wuxuu daawanayay majaajillo oo wuxuu u heellan yahay sameynta fikradaha ku saabsan gravitation. Qalabka loo baahan yahay in lagu cabbiro dhaqdhaqaaqa qorraxda iyo xiddigaha isaga ayaa sameeyay. Waxaas oo dhami waxay horumar weyn siiyeen sayniska iyo u kuurgalida meelaha bannaanka ah.
Aragtida dhaqdhaqaaqa Planetary
Kaliya maahan inuu daahfuray meeraha Uranus laakiin wuxuu abuuray Aragtida Dhaqdhaqaaqa Planetary. Wuxuu awooday inuu ka diyaariyo dhibaatada makaanikada. Wuxuu muujiyey mabaadi'da soo jiidashada guud, ee ka mid ah kuwa ugu adag ee la soo daabacay waxaa ka mid ah midka akhriya: dhammaan jidhku waxay ku dhaqaaqayaan xariiq toosan, illaa ay xoog ka leexiyaan mooyee, tani waxay ka dhigeysaa iyaga inay dhaqaaqaan, ha ahaato qaab goobo ah maahmaah.
Wuxuu sheegay in dhamaan meydadka ay leeyihiin culeys u gaar ah culeyska saaran dhudhunkiisa ama bartamaha isla markaana ay iyagana saameyn ku yeelanayaan culeyska meydadka cirka ee u dhow. Markaynu ugu dhowaanayno meydadka kale ee samada, ayay inbadan noo sii jiidanaysaa xooggan soo jiidashada ah. Sidoo kale, isku dayay inuu hubiyo taas dhulku wuxuu ku socday wareegga qorraxda qorrax madoobaad.
Sidaad u jeeddo, Robert Hooke wuxuu horumar badan ka sameeyey cilmiga sayniska magaciisana lama ilaawi karo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Robert hooke